Home Wararka Rooble oo qadka taleefanka kula hadlay Uhuru & Wafdi ka socda oo...
Rooble oo qadka taleefanka kula hadlay Uhuru & Wafdi ka socda oo qarsoodi ku jooga Nairobi
Sida MOL ay u xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay, waxaa dhowrkii maalin ee u danbeeysay ku sugnaa caasamada dalka Kenya, ee Nairobi, wafdi qarsoodi ah oo ka socda Xafiiska Ra’iisal Wasaare Rooble. Wafdigaan ayaa isugu jira ganacsato, siyaasiyiin ka soo jeeda qoyska uu ka dhashay Ra’iisal Wasaare Roole, iyo xubno ka tirsan xafiiskiisa.
Safarkaan oo laga qariyay warbaahinta iyo qaybaha kala duwan ee dowlada federaalka Soomaaliya ayaa ujeedadiisaa lagu sheegay in uu yahay mid “u gaara RW Rooble iyo saaxiibadiisa” taas oo micnaheedu tahay in RW Rooble uu wadahdal gaar u ah isagu la furtay hogaanka dalka Kenya.
Waxaa MOL loo xaqiijiyay in RW Rooble ii habeen hore qadka taleefanka uu kula xiriiray Madaxweyne Uhuru Kenyatta. MOL ayaa warbixjinay ka heshay xafiiska RW Rooble iyo qaarkamid dadka ku dhaw ay sheegeen in wadahadalka qadka taleefanka ee dhex maray Rooble iyo Uhuru uusan ahay markii u horeeysay laakiin uu yahay mid si joogta ah u socda.
Rooble oo baahi badan u qaba in uu gacanta ku dhigo lacag badan ayaa la sheegayaa in uu aad isugu mashuulinayo in uu la xiriro cid kastaa ee uu lacag ka heli karo. Wadamada Reer Galbeedka ayaa gabi ahaanba ka gaabsaday in ay Rooble kala hadlaan arimo la xiriira lacag madaama ujeedadiisa ay ku soo kooban tay lacag raadin iyo sidii lacag loo siin lahaa.
Su’aalaha la isweydiinaya ayaa ah waa maxay ujeedada uu kulamo gaar gaar ah uu ula yeeshay madaxda dalka Kenya? Ma waxa jira heshiis gaar ah uu la galay dalka Kenya kaas oo ayan ku jirin danta Soomaaliya? Maxaa keenay in uu wafdi gaar ah uu u dirsado dalka Kenya?